What To Do If You’re Stopped By The Police | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » What To Do If You’re Stopped By The Police
Posted by kai on Aug 13, 2014 in How To.. | 10 comments
CContact the Civilian Complaint Review Board by calling 311 or by visiting www.nyc.gov/html/ccrb.
ညန်မာကြည် က ရဲ ဒွေနဲ့ ရော အကျုံးဝင်လားငင်??
အခုတလောအမေရိကန်ရဲတွေလက်သံပြောင်ပြီး.. လူတွေချည်းပစ်သတ်နေတာ.. တော်တော်များနေသမို့.. ဒါကို.. သတင်းစာထဲထည့်ချင်လို့ဗျို့..
San Diego police kill Myanmar refugee who had mental illness
Jul 19, 2014 – San Diego police have shot and killedarefugee from Myanmar who hadamental illness. The young man’s family called police after he threatened them with knives andastick and police then escalated the volatile situation by breaking down the door and sending inapolice dog. After the young man injured the dog withamachete swing to its back he allegedly swung the weapon at police prompting two officers to open fire. This case is part ofagrowing problem of people with severe mental disorders who are coming in contact with the criminal justice system, with sometimes deadly consequences, without adequate mental health services. Asaresult of other tragic killings by police, many police departments are usingacrisis intervention team model, in which specially trained officers are dispatched toascene whenaperson with mental illness is involved. An article at Fox5San Diego covers the killing of the refugee from Myanmar:
ဘာသာပြန်က ခုထိ မရသေးဝူးလားး
ဇော်သန့်ကိုတော့ အမြီး ကို ဖမ်းမရဘူးး
ပလေးဘွိုင်းဖက်မှာလည်း.. ဘာသာပြန်ချင်တာ.. တမျက်နှာရှိသေး..။
ကျနော် ပါပါး နဲ့ မားမား က Aug ၂၃ ရက်နေ့ရောက်မှာမို့လို့ မအားလို့ ကိုယ်တိုင်ဘာသာမပြန်နိုင်တာ။
စက်တင်ဘာလလယ်လောက် ဆိုရင်တော့ ရှာပေးရင်လည်း ပေး….
မပေးနိုင်လည်း…. ကျနော် ပြန်ပေးပါမယ်။
ခု အားဂျင့် ဟာကိုတော့ သူတို့ကိုပဲ။
ကျော် … အစမ်းပြန်ကျိမယ်နော် ….
မွှားရင်ဒေါ့ ရှေ့မှာရော၊ နောက်မှာရော လှောင်ဂျနဲ့ဗျ …
အမေရိကန်ရဲ မှ မြန်မာလူငယ်တစ်ဦးအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်
– Ja Ma Lo Day (Facebook)
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ရှိ ဆန်ဒီယေကိုမြို့မှ ရဲသားများမှ စိတ်မနှံ့သူ မြန်မာ လူငယ်တစ်ဦးအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အသတ်ခံရသူ စိတ်မနှံ့သူ မြန်မာလူငယ်သည် သူ၏ မိသားစုအား ဓားများ၊ တုတ်များဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မိသားစုဝင်များမှ ရဲခေါ်၍ ထိန်းသိမ်း ပေးပါရန် တိုင်တန်းခဲ့သည်။ ရဲသားများ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ဓားများ၊ တုတ်များ ကိုင်ဆောင်ထားသော စိတ်မနှံ့သူ မြန်မာလူငယ် ရှိနေသည့် အခန်းတံခါးအား ရိုက်ချိုးပြီး ၎င်းတို့တွင် ပါလာသော ရဲခွေးများအား လူငယ်ထံသို့ လွှတ်လိုက်ရာ လူငယ်မှ ကိုင်ဆောင်ထားသော ဓားဖြင့် ခွေးအား တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ခွေးလွှတ်လိုက်သော ရဲသားအားလည်း ထပ်မံ တိုက်ခိုက်ရန် ဟန်ပြင်လိုက်ရာတွင် ပါလာသော ရဲသားများမှနေ၍ အဆိုပါ လူငယ်အား သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသေနတ် ဒဏ်ရာများကြောင့် မြန်မာလူငယ်မှာ သေဆုံးခဲ့ရသည်။
အသတ်ခံရသူ လူငယ်နှင့် သူ၏ မိသားစုမှာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပြဿနာများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေး ခိုလှုံလာသူများ ဖြစ်ကြောင်း၊ လူငယ်မှာ ၎င်း၏ မိသားစုတွင် သားအကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ အထက်ပါ ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ လူငယ်၏ မိသားစုနှင့် ရင်းနှီးသော ဒုက္ခသည်များ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့အစည်းမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်သူ Wendy Gelernter မှ
“မိနစ် ၂၀ အတွင်းမှာ ရဲတွေက တံခါးကို ရိုက်ချိုးလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ခွေးကို လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ စိတ်မူမမှန် ဖြစ်နေပြီး ကြောက်လန့်နေတဲ့ လူဆီကို ဒီလိုမျိုး အကြမ်းနည်းသုံးပြီး ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာ မှားတာပဲ။ တကယ်တော့ ဒီကောင်လေးက ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တတ်တဲ့ လူမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြောက်အားလန့်အား ဖြစ်နေတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ ထင်ရာစိုင်းတတ်ကြတာပဲ။”
ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ စိတ်မနှံ့သူများနှင့် ရဲသားများ အကြား ကြီးထွားလာသော ပြဿနာ တစ်ရပ် ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရောသမမွှေ ပျံထားတာ ….
FOX5San Diago က စာတွေကမှ ဖတ်ရတာ နားလည်သေးတယ် …
အပေါ်က ဟာတွေကို သိပ်နားမလည်ဘူး …
အဲ့ဒါ … လွှဲနေတဲ့ နေရာတွေ ရှိရင် ပြောပေးဘာအုံး …
ဒါမှ ပြင်လို့ ရနိုင်မှာမို့ဘာ ….
အခုဟာက ရမ်းတုတ်မှန်းတုတ် လုပ်ထည့်လိုက်တာ ….
တကယ် ပြန်ချင်တာ အပေါ်က ပို့ စ် ဟ။
အိုင် ဒုန့် နုန်း မုန့်ပျစ်စလပ် ….
ညက လူက နည်းနည်း ဂေါက်သွားလို့ ..
အပေါ်ဂဟာကို ရေးမိတွားဒါ …
အခု ကောင်းတွားဘီ … ခိခိ
-ညန်မာကြည် မှာတော့ ဘယ်ရမလဲကေဇီရယ်